Taariikh kooban oo ku saabsan Xildhibaan Maxamed Mire oo maanta lagu aasay degmada Waaciye – Kalfadhi
Degmada Waaciye ee gobolka Karkaar waxaa maanta lagu aasay xildhibaan Maxamed Faarax Mire oo xalay ku dhintay shil baabuur ka dhacay deegaankaas. Maxamed wuxuu ka mid ahaa golaha wakiillada Puntland, gaar ahaan xubnaha dhalinyarada ah ee cusub.
Sanadkii 1987 ayuu ku dhashay degmada Boosaso, halkaas oo uu kaga baxay ilaa dugsiga sare, sidoo kale kulliyadda dhaqaalaha ayuu ku diyaariyay jaamacadda Bariga Afrika ee Boosaso oo uu ku qaatay heerka koowaad (Bachelor’s Degree).
Wuxuu ahaa Aabaha Siddeed carruur ah (Lix wiil iyo laba gabdhood) iyo saddex xaas.
Eheladiisa oo aan waraysannay waxay inoo sheegeen in Maxamed uu ahaa nin hal abuur iyo galaangal leh. Wuxuuna 10kii sano ee u dambeeyay ku lug lahaa dhinaca ganacsiga, mudooyinkii dambe wuxuu magaalada Boosaso ku lahaa dukaan lagu iibiyo agabka tiknoolajiyadda.
Arbaco 2dii Janaayo, 2019 ayaa loo dhaariyay inuu ka mid noqdo golaha wakiillada cusub ee Puntland oo mudo xileedkoodu yahay Shan sano. Wuxuuna golaha ku metelayay degmada Boosaso.
Gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed oo xalay saxaafadda tacsi u mariyay qoyska xildhibaanka ayaa sheegay in Maxamed uu ahaa xubin firfircoon oo golaha ka baxday.
Golaha wakiillada Puntland ayaa hadda fasax ku kala maqan, waxayna kalfadhiga 43aad oo weli furan dib ugu soo noqon doonaan 20ka Maarso, 2019 si ay uga shaqeeyaan miisaaniyadda dowladda ee sanadkan.
Puntland oo guddi u saartay u kuur-gelidda xaalada Abaaraha oo ay reer miyigu qaylo-dhaan ka muujinayaan